Lozam-pifamoivoizana teny Mandroseza Mamon’ny zava-pisotron’ny fety ny mpamily
Noho ny fandraisana zava-pisotro misy alikaola nandritra ny fetim-pianakaviana no nahatonga ny loza teny Mandroseza.
Mamo ny mpamily izay nitondra mafy ilay fiarakodia, ny faran’ny herinandro
teo ka nampivadika ilay fiara. Zaza amam-behivavy no maro an’isa niharan-doza. Voalaza aloha fa tsy nisy ny aina nafoy fa tsy vitsy koa anefa ireo naratra. Fotoanan’ny fifampiarahabana etsy sy eroa izao
ka tsy ilaozana fandraisana ilay mafana kely. Mampalahelo anefa raha ny fandiniky ny mpanara-baovao ireo zaza amam-behivavy izay tsy manam-pidiny fa voatery nandeha amin’ireo fiara na dia efa
nisotro toaka aza ny mpamily. Efa ampoizina ny loza fa tsy afa-manoatra ireo mpandeha. Azo heverina fa tsy mahataka-davitra ihany ka mendrika famaizana ireo mpamily mbola hitondra olona hody rehefa vita fety toy izao. Ireo mpandeha mihitsy koa tokony ho nampandre ny manampahefana fa noho ny fihavanana sy ny sitrany ahay ary ny fahantrana dia mandeha ihany na efa hampidi-doza aza. Loza efa ahiana hihatra ny toy izao ary tanteraka. Midika izany fa misy andraikitra maro ifampizarana ao, hatramin’ny mpampisotro, ny mpamily izay nanao sorona ireo nentiny. Tsy afaka hanome tsiny fotsiny koa ireo mpandeha fa manana andraikitra na nanda tsy handeha mihitsy tamin’izany, eo Mandroseza izay efa ahitana taksibe na taksi.